China Abenzi bentsimbi kunye nabathengisi | I-P & Q
I-P & Q ayinaso isinyithi okanye umzi mveliso we-CNC, kodwa inokubonelela nangamalungu ephepha ngokweemfuno zabathengi. Incinci ukuya kubukhulu obukhulu, isetyenziswe ngokubanzi ekukhanyeni nakwifenitshala yesitalato, njl njl.
Ukuhambisa iindleko-Izisombululo ezisebenzayo
Umboneleli ngenkonzo yokwenziwa kwemvumelwano unokukunceda kubunzima bokuchonga kunye nokuqinisekisa abathengisi-ngakumbi ababoneleli beenxweme.
Iinkampani zokwenza ikhontrakthi ezinamava aselunxwemeni zinokukhawuleza zichonge umthengisi onokuthi azifezekise iimfuno zakho. Bayazi ukuba zeziphi iinkampani ezinakho ukuvelisa iinxalenye zakho, zindwendwele kwaye ziphicotha izibonelelo zemveliso, kwaye bayazi ukuba ngabaphi na abathengisi abanelona rekhodi lilungileyo lomgangatho kunye nezixhobo zexesha kunye nemveliso.
Amandla e-P & Q avela ngokungaguquguqukiyo eyahlulahlula amashishini anikezelweyo, isiseko sabathengi, ubume bendawo, isicwangciso sokufumana, kunye nokufikelela kwempahla. I-P & Q inokunciphisa iindleko zakho, inciphise iimfuno zakho zoluhlu, kwaye usike amaxesha okuhola.
Inkqubo yolawulo lomthengisi we-P & Q isebenzisa iiarhente zokufumana ulwazi kunye neenjineli ezisemgangathweni. Sifumana abathengisi bemveliso ngokusekwe kumgangatho, ixesha lokuhambisa, kunye nexabiso. Iikhrayitheriya zethu zababoneleli zibandakanya isatifikethi se-ISO, amaziko okuqhubela phambili okuvelisa, amandla aqinisekisiweyo okwenziwa kwesithembiso, izixhobo zobunjineli, iQA, kunye nemveliso yexesha. Bonke abathengisi be-P & Q kufuneka bapase uphicotho-zincwadi lwethu olungqongqo ukulungiselela izakhono zokuvelisa kunye nokuqinisekiswa komgangatho. Bayacelwa ukuba babonakalise umgangatho kunye nokuhambisa amandla okuhlangabezana neemfuno ezifunwayo zabathengi bethu.
Iindleko eziphantsi zabasebenzi kunye nezixhobo
Iimilo ezintsonkothileyo ezifezekiseka ngokulula
Izinto ezisetyenzisiweyo Kuba CNC Machining
Egqithileyo Inaliti yeplastiki
Okulandelayo: Indibano yeemveliso ezigqityiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo
Indibano yeemveliso ezigqityiweyo kunye nokugqitywa semi ...